Dhibaatada guri ka kireynta Mareykanka | Dhaqaalaha
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | meesha lagu nool yahay
Inta badan dadka Mareykanka maanta ma xamili karaan guri kireysasho. Qiimayaashu way sii kordhayaan marba marka ka dambeysa qayb wanaagsan oo ka mid ah dhibaatadana waa inay la xiriirtaa gaar ahaan ciyaarta saadka iyo baahida. Malaayiin muwaadiniin ah ayaa lumiyay guryahooda intii lagu jiray dhibaatada deynta guryaha, taas oo lagu qasbay inay si buuxda u galaan suuqa kirada. Sannadkii 2004, 31% dadka Mareykanka ah ayaa kiraystay. Maanta tiradu waa 35%.
Sida iska cad, inta badan ee dadku soo galeen suuqa kirada, qiimayaashu way sii kordhayaan, maaddaama tirada guryuhu aysan u kicin inay daboolaan baahida weyn. Si wada jir ah ula socoshada dhibaatada deynta guryaha, burburka dhaqaale iyo dib u dhaca dhaqaale waxay la yimaadeen koror shaqo la’aanta iyo, sidaas darteed, hoos u dhaca dakhliga. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah malaayiintaas Mareykanka ah ayaa arkay iyaga oo u rajeeyay inay awoodaan inay wajahaan kiro.
Sida haddii intaas oo dhami aysan ku filnayn, Jamhuuriyeyaashu waxay sii yareeyeen kharashka loogu talagalay barnaamijyada federaalka, oo ay ku jiraan caawimaad helitaanka guri. Ku dhowaad dhammaan barnaamijyada gargaarka ee dowladda ayaa arkay dhimista maalgelinta sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan kuwa ugu saboolsan. Sanadkii 2013, ilaa 125.000 oo qoys ayaa lumiyay xoogaa gargaar kiro ah, markii sanadihii hore aysan sidaa aheyn.
Uma baahnid inaad aqoon durugsan u leedahay arrinta si aad u ogaato marka aad isku darsato yaraanta guryaha kirada ah dakhligoodu hooseeyo iyo caawimaad la'aanta dawladda, waxaa noo hadhay xaalad lagu tilmaamay inay tahay Maraykanka dhibaatada ugu weyn ee kirada guryaha ee taariikhda ka yimid dalka. Qiyaasta qoysaska ku bixiya in ka badan saddex meelood meel dakhligooda kirada ayaa kordhay 12% ilaa 2000.
Maanta, kala bar dadka Mareykanka ah ee kirada ku nool waxay bixiyaan in ka badan 30% dakhligooda bil walba ka soo gala guriga, halka ay jiraan 28% bixiya in ka badan kala bar mushaharkooda billaha ah. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa $ 1.956 San Francisco ilaa $ 700 Lincoln, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu raqiisan Mareykanka. Tusaale ahaan Washington, waxay bixiyaan celcelis ahaan $ 1.469 oo kiro ah, 1.454 Boston, 1.440 New Nork ama 1.398 oo ku taal Los Angeles.
El Dowladii Obama Waxay diiradda saaraysaa qayb wanaagsan oo ka mid ah dadaalkeeda ku saabsan yareynta dhibaatadan halista ah. Ilaa hadda dhammaan dadaallada kuma filna in la joojiyo dhibaatadan. Ilaa maanta, malaayiin Mareykan ah ayaan wali awoodin inay xitaa awoodaan inay kireystaan ​​guri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » meesha lagu nool yahay » Dhibaatada guryaha kirada ee Mareykanka